गर्न सक्छन् Xians मजा? — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
म यो ज नियम साक्षात्कार हेर्नुभयो हिजो. उहाँले चर्च आफ्नो अनुभव कुरा थियो. तपाईं रूपमा आफ्नो अनुभव चर्चमा सधैं आउन बताएका, तर वास्तवमा यो भनाइको तात्पर्य कहिल्यै. उहाँले स्वागत महसुस कहिल्यै. र मान्छे आग्रह गर्दा उहाँले आफ्नो जीवन मा ख्रीष्टको स्वीकार यदि, उहाँले तयार छैन भने. उहाँले अब सुसमाचार रेकर्ड गर्न थियो चाहनुभएको भनेर लाग्यो. उहाँले मसीहीधर्म दिइएको थियो कि तस्वीर तपाईं आफ्नो बारेमा सबै कुरा परिवर्तन गर्न थियो जहाँ थियो; के तपाईं आनंद गरिएको छ सबै आनंद रोक्न थियो. यदि एक मसीही बनेर तपाईं आफैलाई रमाइलो गर्न चाहन्थे भने तपाईं के चाहन्छु अन्तिम कुरा हो रूपमा!
मजा के हो?
यहाँ मजा शब्दकोश मा परिभाषित गरिएको छ कसरी गर्ने. मजा छ: आनन्दको स्रोत, मनोरञ्जन, वा खुशी. त्यहाँ एक मसीही बनेर आफ्नो ज्ञान र आनन्दको अनुभव अर्थ कुनै प्रश्न छ, मनोरञ्जन, र खुशी परिवर्तन हुनेछ. यो नै रहन सक्छ यदि तपाईं सोच गर्दै हुनुहुन्छ भने, यसलाई गर्न सक्दैन. त्यहाँ एक मसीही बनेर जीवनमा देख्न बाटो परिवर्तन भन्ने कुरामा कुनै शंका छ.
प्रश्न छ: यसलाई सहयोग या आफ्नो मजा दुख्छ? ख्रीष्टियन आफ्नो आनन्दको को शत्रु हो, मनोरञ्जन, र खुशी? वा यो तपाईं आनन्दको अनुभव मदत गर्छ, मनोरञ्जन, र आफ्नो साँचो अर्थमा खुशी? हाम्रो संस्कृति सबैलाई यो सही मिल्यो? स्पेक्ट्रम को विपरीत कुनामा मसीहीधर्म र आनन्द हो?
म यसरी मिडिया मा चित्रण गर्दै किनभने बाटो मसीहीहरूको छ मान्छे मसीहीधर्म कुरा कारण एक विचार. एउटा चलचित्र वा टिभी शो मा कुनै पनि मसीही मान्छे खराब छ. तिनीहरूले सामान्यतया आलोचक र corny हुनुहुन्छ. मान्छे अन्याय धेरै मसीहीहरूले प्रकृति र सबैभन्दा हास्यास्पद सामान ध्यान दिन.
केही मसीहीहरू र मसीहीहरूले कल आफूलाई गर्नेहरूलाई कि अनुभूति बन्द दिन किनभने दोस्रो कारण हो. तिनीहरूले स्टीरियोटाइप योगदान. केही ख्रीष्टियनहरू साँच्चै केहि मजा छैन र तिनीहरूले परमेश्वरले यो दोष, यदि यो उहाँको गल्ति हो रूपमा.
त्यसैले के मलाई लाग्छ के? म आज राती लागि प्रश्न गर्न दुई जवाफ छ. मसीही मेरो आनन्द अन्त मतलब बन्ने गर्छ? मेरो पहिलो जवाफ छ: कुनै
म. कुनै - एक मसीही बनना तपाईंको मजा को अन्त होइन
तपाईं साँच्चै यो सोच्न भने, यो सोध्न एक अनौठो प्रश्न छ. "एक मसीही आनन्दको अन्त मतलब बन्ने गर्छ, मनोरञ्जन, र मेरो जीवन मा खुशी?"त्यस प्रश्न सोध्न परमेश्वरको बारेमा कुरा भन्छन्. यदि एक मसीही हालतमा ख्रीष्टमा विश्वास मार्फत परमेश्वरको निम्न हुनुको, त्यसपछि यो सोधेर गर्नुपर्छ प्रश्न rephrase गर्न: तपाईं एक संयुक्त राष्ट्र-रमाइलो जीवन छ परमेश्वरले चाहनुहुन्छ? हो जवाफ उहाँलाई बारेमा साचो कुरा भन्छन्. उहाँले सबै जीवनको सिर्जनाकर्ताको. पक्कै त्यो उहाँ सिर्जना भएको जीवन रमाइलो गर्न चाहन्छ.
यो सोधेर जे-जेड वा Kendrick ल्यामार आफ्नो नवीनतम एल्बम घृणा गर्न तपाईं चाहनुहुन्छ भने जस्तै हो. उहाँले तपाईं बस यसलाई माध्यम ग्रस्त चाहनुहुन्छ र यसलाई घृणा गरे? वा स्टीवन स्पीलबर्ग जस्तै तपाईं आफ्नो चलचित्र घृणा गर्न चाहन्थे, वा उहाँले तपाईंलाई लिंकन यति घृणा किनभने तपाईं बन्द सुस्त चाहन्थे. खैर को पाठ्यक्रम छैन! तिनीहरूले गरे, अांशिक रुपमा, त्यसैले अरूलाई आनन्द भनेर.
जीवन फरक छ, किनभने यो मनोरञ्जन को केही फारम छैन, तर समानता छन्. के हामी धर्मशास्त्र देखि थाहा परमेश्वर असल परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने छ. उहाँले जीवनको सिर्जना. उहाँले आफ्नै स्वरूपमा हामीलाई गरे र उहाँले पूर्ण गर्न भनेर जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ. उहाँले यसको लागि जीवन उहाँलाई आनन्द र प्रशंसा चाहनुहुन्छ.
त्यहाँ परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो जीवन रमाइलो गर्न चाहनुहुन्छ गर्दैन सुझाव कि बाइबल केही छ. जब तपाईं बाइबल पढ्न भनेर तपाईं प्राप्त गर्न जाँदै हुनुहुन्छ चित्र केवल छ. बाटो मान्छे मसीहीधर्म कुरा जहाँ येशू भन्नुहुन्छ तपाईं त्यहाँ एक पद थियो लाग्छ चाहन्छु, "तपाईंले मलाई पालना भने, तपाईं दयनीय हुनुपर्छ, सबै घृणा, र तपाईं अरूलाई तल तान्नुहोस्। "तर तपाईं जस्तो कुनै पनि पद पाउन जाँदै हुनुहुन्न.
बरु तपाईं परमेश्वरले हामीलाई हाम्रो जीवन रमाइलो गर्न चाहने पाउनुहुन्छ. म पदहरू एक जोडी म बिन्दु यो बाहिर लाग्छ पढ्न जाँदै छु.
मान्छे लाग्छ परमेश्वरको असल कुराहरू हामीलाई राख्न चाहन्छ, तर झूट हो. जेम्स सुन्न 1:16-17.
के छल्न छैन, मेरो प्यारो भाइ. हरेक असल वरदान र हरेक उत्तम उपहार माथिबाट छ, रोशनी को पिता बाट आउँदै कोसँग कुनै विविधता वा छाया परिवर्तन कारण छ. (जेम्स 1:16-17)
परमेश्वरको असल कुराहरू हामीलाई राख्न प्रयास गर्दैन; परमेश्वरले सबै राम्रो कुराको दाता छ. उहाँले स्रोत हो. आफ्नो आश्रय र लुगा लागि भुक्तानी गर्ने मान्छे तिनीहरूलाई लागि राम्रो कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो सोधेर एक अनाथालय मा बच्चाहरु जस्तै छ. तिनीहरूले तपाईँको भनाइको अर्थ सबै कुराको लागि भुक्तानी? यो एक असंगत प्रश्न छ.
परमेश्वरको मित्रता र विवाह सिर्जना. परमेश्वरको हँसिलो र हास्य सिर्जना. यी परमेश्वरले सबै उपहार हो. त्यसैले उहाँले हामीलाई ती आनन्द उठाउन चाहन्छौं छैन जस्तै व्यवहार गर्न हास्यास्पद छ.
येशूको बारेमा के? उहाँले यस बारेमा भन्न केहि छैन? यूहन्ना 10, येशूले झूटा शिक्षकहरू संग आफूलाई भिन्नताहरूलाई. यी झूटा शिक्षकहरू मान्छे हराउनु नेतृत्व; तिनीहरूले खराब गोठालाहरूले थिए. येशूले तिनीहरूलाई चोर भनिएको.
"चोर चोर्न आउँछ, मार्न, र नष्ट. म तिनीहरूले जीवन हुन सक्छ कि आए, र यो प्रशस्त मात्रामा छ। " (यूहन्ना 10:10)
यो अक्सर हाम्रो संस्कृति मा भन्न के विरुद्ध सीधा जान्छ. तिनीहरूले परमेश्वरको चोरी गर्न चाहन्छ लाग्छ. हाम्रो आनन्द चोरी, आनन्द, र स्वतन्त्र इच्छा. परमेश्वरले हामीलाई मार्न र हामीलाई तल तान्न चाहन्छ त्यो. तर येशू भन्नुहुन्छ, उहाँले प्रशस्त जीवन छ वा पूर्ण जीवन दिन आए. उहाँले पूर्ण हाम्रो जीवन बिताउन चाहनुहुन्छ. हामी पछि त्यो बारेमा थप कुरा छौँ.
भजन मा 16, दाऊदले परमेश्वरको कुरा र यहाँ छ उहाँले के भन्छ छ.
"तपाईं जीवनको बाटो मलाई प्रकट; आफ्नो उपस्थिति त्यहाँ आनन्दको पूर्णतामा छ; आफ्नो दाहिने मोजमस्ती सधैंभरि धेरै छन्। " (भजन 16:11)
त्यसैले नजिक परमेश्वरको आउँदै बोरिंग दुःख नेतृत्व गर्दैन, यो आनन्द जान्छ. कुनै पनि आनन्द छैन तर आनन्दको पूर्णतामा. र मोजमस्ती छन्. पाँच मिनेट वा खुशी पाँच वर्ष, तर forevermore मोजमस्ती.
म यो जस्तै पदहरू संग दिनको लागि मा जान सक्छ. ख्रीष्टियन आनन्दको को शत्रु छैन, मनोरञ्जन, र खुशी. यो वास्तवमा साँचो आनन्दको गर्न सडक छ, मनोरञ्जन, र खुशी.
गएको हप्ता, मेरी श्रीमती र म IMAX 3D मा गुरुत्व हेर्न गए. तपाईं तिनीहरूले तपाईं यी ठूलो clunky चश्मा धारण गर्न दिन थाहा. तर के यसको सट्टा ती चश्मा को यदि हामी घर बाट हाम्रो निद्रामा मास्क ल्याए? तपाईं त्यो बाहिर सबै ज्योति रोक्न चश्मा जस्तै धारण ती कुरा थाहा? तपाईं अन्धकार तर केहि देख्नुहुन्न.
अब 3D चश्मा को सट्टा हामी निद्रामा मास्क धारण यदि के भयो होला? हामी सारा चलचित्र सम्झना चाहन्छु. तर हामी ती 3D चश्मा धारण किनकी यो अचम्मको थियो. हामी चलचित्र थिए जस्तो थियो. त्यसैले यो हावा मा फ्लोट थिएन म तल मेरो पेय पकड थियो. सामान हाम्रो वरिपरि थियो. सामान हामीलाई आउँदै थियो. यो चश्मा जीवन अनुभव ल्याए.
उहाँले हामीलाई चलचित्र मा कि निद्रामा मास्क हात गर्न प्रयास जस्तो परमेश्वरले व्यवहार, जब साँच्चै उहाँले हामीलाई 3D चश्मा हात गर्न प्रयास गर्नुपर्छ. उहाँले हाम्रो आनन्द ब्लक गर्न प्रयास होइन, र अन्धकारमा हामीलाई छोड्न. उहाँले हाम्रो आनन्द उन्नत र पूर्ण गर्न चाहनुहुन्छ. उहाँले हामीलाई यो आनन्द उठाउन गर्न चाहनुभएको थियो जीवनको आनन्द उठाउन चाहन्छ. दुःखको कुरा हामी सधैं जस्तो के देखिन्छ थाहा छैन.
हाम्रो समस्या हामी मजा गरिरहेको मतलब छाप हामी कुनै पनि क्षण मा जस्तै महसुस जे अन्तर्गत छ. तर हामी साँच्चै यो सोच्न भने, हामी सबै एक खराब विचार हो थाहा. तिनीहरू गर्दै जस्तै महसुस सबै एक दास हुन चाहन्छ? हामी fickle हुनुहुन्छ.
मेरो छोरा रमाइलो गर्न चाहन्छ र त्यो दोकान मा आफ्नो औंला टाँसिएको त्यसो गर्न सबै भन्दा राम्रो तरिका हो सोच्छ. उहाँले मलाई देखि निर्देशन आवश्यक. र मेरो छोरा मरणासन्न सट्टा रमाइलो रहेको छ भने उहाँले मलाई विश्वास छ. उहाँले सिंढीबाट हिड्ने सोच्छ लग मजा. तर एक वयस्क रूपमा, म त्यो राम्रो छैन हिंड्न भनेर थाहा र उहाँले तल लडनु छौँ.
भगवान जीवनको सृष्टिकर्ता र उहाँलाई थाह छ. हामी सबै हामी सबै-थाह छैन हुनुहुन्छ भनी स्वीकार हुनेछ. त्यहाँ हामी बुझिन कुराहरू छन्. किनभने हामी पापी छौं, हामी गलत कुराहरू मोल. हामी परमेश्वर र उहाँको चरित्र विश्वास छ.
केही मानिसहरू लाग्छ, "कि राम्रो सुनिन्छ तर परमेश्वरले ती सबै आदेशहरू मजा कामहरू गर्न बताउने छ।" अनि तपाईं सही छौं; त्यहाँ केही कुराहरू हामीलाई निषेध कि आदेशहरू छन्. हाम्रो मजा बर्बाद हुनेछ भनेर तर यो छ?
यो प्रश्न मेरो दोस्रो जवाफ मलाई ल्याउँछ. मसीही मेरो आनन्द अन्त मतलब बन्ने गर्छ? मेरो दोस्रो जवाफ छ: कहिलेकाहीं.
द्वितीय. कहिलेकाहीं – येशूको पछि हाम्रो मजा केही अन्तबाट मतलब हुनेछ
म तपाईंलाई धोका चाहँदैनन्. मसीही तपाईं हुनेछ आफैलाई इन्कार गर्न बनेर के मतलब. तपाईं आनन्द कुराहरू तपाईं लागि खराब हो कि हो, लामो यो दिने आनन्द सट्टा चोरी कुराहरू.
मतवालापन मजा देखिन्छ तर मूर्ख निर्णय गर्न जान्छ. सेक्स विवाह रमाइलो देखिन्छ अघि, तर घनिष्ठता को भनेर गहिरो स्तर परमेश्वरको अन्तर्गत कि आजीवन प्रतिबद्धता अलग्गै आनन्द उठाउन गर्न चाहनुभएको कहिल्यै थियो. यो अरू कसैले गर्न टाढा आफैलाई दिन सक्ने गहिरो तरिका हो. रमाइलो गर्न जान्छ जस्तै कहिलेकाहीं झूट देखिन्छ तर यसले हामीलाई र अरूलाई नोकसान पुग्छ.
हामी पहिले नै स्वीकार गर्नुभएको रूपमा, परमेश्वरको जीवन को सबै सिर्जना र उहाँले यो आनन्द उठाउन मानिन्छ कसरी गर्ने थाह. उहाँको आदेशहरू हाम्रो राम्रो लागि हो. उहाँको दाहिने मोजमस्ती forevermore छन्. र हामी उहाँलाई भङ्ग गर्दा, हामी साँचो आनन्द टाढा सार्दै. परमेश्वरले हामीलाई असल जीवन देखि राख्न गर्दैन; हामी उहाँलाई भङ्ग गर्दा हामी असल जीवन आफूलाई राख्न.
र मायालु कार्य येशू हामीलाई अस्वीकार गर्न भनिएको छ.
अनि उहाँले सबै भन्नुभयो, "यदि कसैले मलाई पछि आउने, उहाँलाई आफूलाई अस्वीकार गरौं, र दैनिक आफ्नो क्रस लाग्न, र मलाई पछ्याउँछन्। " (लूका 9:23)
यो आफैलाई अस्वीकार गर्न के मतलब? आफैलाई इन्कार आफैलाई कुनै भन्दै अर्थ. आफैलाई इन्कार. तपाईं स्वाभाविक गर्न चाहनुहुन्छ के इन्कार.
यो राम्रो र फ्लफी आवाज छैन. शायद तपाईं कि राख्नु छैन एक पहिचान कार्डमा. यो चेलाहरूलाई धेरै उत्साहजनक छैन. येशूले नियन्त्रणमा र अर्थ र अपमानजनक भइरहेको छ?
हामी सिद्ध थिए भने, आफूलाई हास्यास्पद हुनेछ अस्वीकार हामीलाई सोधेर गर्न. हामी सधैं राम्रो र हामीलाई सोधेर बुद्धिमानी थिए भने आफूलाई अनौठो हुनेछ अस्वीकार गर्न. तर हामी सोधेर त्रुटिपूर्ण हुनुहुन्छ भने आफूलाई मायालु छ अस्वीकार गर्न. हामी भ्रममा र भद्रगोल हुनुहुन्छ भने, अस्वीकार गर्न हामीलाई सोधेर आफूलाई उपयोगी छ.
तपाईं आफैलाई सधैं भरोसा गर्न सक्छौं. तपाईं आनन्द कुराहरू तपाईं लागि खराब हो कि हो. कति पटक तपाईं मजा देखिन्थ्यो निर्णय गरेका छन्, तर तपाईंले पछि नतिजा सामना गर्न थियो?
तिमी मलाई पालना गर्न चाहनुहुन्छ भने येशूको भन्दै छ, तपाईं आफैलाई निम्न रोक्न छ. यो निर्देशन लागि कसैले सोधेर जस्तै छ. तपाईं महसुस भने तपाईं गलत बाटो जाँदै गरिएको छ, र तपाईं मदत गर्न कसैले सोध्न, तपाईं आफ्नो बाटो जा राख्न सक्दैन. निम्न येशूले एक अर्थमा admitting तपाईं हराएको छ भनेर हुनुहुन्छ र कसैले खाँचो तपाईं निर्देशन गर्न. त्यसैले येशूले यसो भन्दै छ, जान. मलाई स्टेरिड़ दिनुहोस्. तपाईं मलाई आफैलाई दिएको छु. म मास्टर छु. म नेता हुँ. यो यसको अर्थ के मेरो पछि आउन छ.
यदि मेरो पत्नी भन्नुभयो, तपाईं मेरो पति हुन चाहनुहुन्छ भने तपाईंले आफैलाई इन्कार र मलाई पछ्याउन छ. म हा जस्तै हुन चाहन्छु? मेरो छोरा बताए भने… म साँच्चै उहाँले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ देखि छैन छक्क चाहन्छु. संयुक्त राज्य अमेरिका को राष्ट्रपति बताए भने, म यसलाई अस्वीकार थियो. तापनि मेरो पास्टर भने, आफैलाई इन्कार र म यसलाई कुनै कुरा के छ भन्न जे गर्न, म अर्को चर्च जाने चाहन्छु. किन? किनभने म पूर्ण अर्को पापी व्यक्ति भन्दा मेरो जीवनको reins दिन चाहँदैनन्. त्यो हास्यास्पद छ. यसले मलाई मदत गर्दैन. तिनीहरू पूर्ण या त मेरो जीवन नेतृत्व गर्न सक्दैन. तिनीहरू आफ्नै समस्याहरू.
तर येशू ख्रीष्टले छैन अर्को पापी व्यक्ति छ. उहाँले पवित्र छ, उहाँले मेरो सिर्जनाकर्ताको, र त्यो यति पापी परमेश्वरको मिलाप गर्न सकिएन मृत्यु. उहाँले भरोसायोग्य छ. उहाँले मेरो जीवन जस्तै हेर्नुपर्छ के थाह. उहाँले मतलब हुनुको होइन, उहाँले मलाई मायालु गर्नुपर्छ. मसीही तपाईं कहिलेकाहीं आफूलाई कुनै भन्न साइन अप अर्थ हुँदा.
यदि तपाईं नियमित आफैलाई कुनै भन्दै गरिरहनु भएको छैन, तपाईं साँच्चै येशूको हुनुहुन्छ कि तपाईं आफैलाई सोध्नुपर्छ. हामीले नियमित रूपमा गलत हुनुहुन्छ र हामी उहाँको मदत चाहिन्छ किनभने.
धर्मशास्त्र मा realest पुस्तकहरू एक उपदेशक पुस्तकमा छ. यो शायद सुलेमानले लेखिएको. यसमा, उहाँले सबै अर्थहीन छ कसरी वार्ता. उहाँले सबै को धेरै थियो नभएकोले, उहाँले अनुभवबाट बोल्छ. यहाँ उहाँले भन्नुभयो के.
"जसले प्रेम पैसा पैसा सन्तुष्ट हुने छैन।" (उपदेशक 5:10)
त्यसैले तपाईं यो लिन सक्छ, यहाँ हामी जाने. तिनीहरू सबै घृणा, पैसा सहित. मलाई यो रमाइलो गर्न परमेश्वरले चाहनुहुन्छ गर्दैन. वा के तपाईं कहिल्यै पूरा गर्नेछ भन्ने कुरा पछि chasing तपाईं सुरक्षा परमेश्वरको रूपमा यसलाई देख्न सक्थे
उहाँले पछि के भन्छ सुन्नुहोस्:
सबैजना पनि कसलाई परमेश्वरको धन र सम्पत्ति र तिनीहरूलाई रमाइलो गर्न शक्ति दिनुभएको छ, र आफ्नो धेरै स्वीकार र आफ्नो मा रमाउने कठिन श्रम-यो परमेश्वरको वरदान हो. उहाँले परमेश्वरको आफ्नो मनमा आनन्द उहाँलाई कब्जा राख्छ किनभने धेरै आफ्नो जीवनको दिन सम्झना हुनेछ लागि. (उपदेशक 5:19-20)
एक अन्तर्विरोध छ? पैसा आनन्द लिनुहोस्? म त्यो तपाईं पूरा छैन भने लाग्यो. परमेश्वरको आनन्द दिन्छ, छैन पैसा. पैसा तपाईं पूरा गर्दैन, यो सिर्फ तपाईं बढी पैसा चाहनुहुन्छ बनाउँछ. यो यसको लागि बाँच्न लाटा छ. तपाईं केहि आनन्द उठाउन सक्छौं, यसलाई आफ्नो प्राण पूरा गर्नेछ भन्ने गलत धारणा अन्तर्गत जीवित बिना. परमेश्वरले हामीलाई रक्षा गर्न प्रयास गरिरहेको छ.
हाम्रो समस्या हामी दाता सट्टा उपहार उपासना गर्न चाहनुहुन्छ छ, सृष्टिकर्ताको सट्टा सृष्टिलाई. हामी चित्रकार सट्टा क्यानभास उपासना गर्न चाहनुहुन्छ, सट्टा पृष्ठ लेखक. हामी सबै कुरा प्रदान गर्दछ जो एक सट्टा पैसा पछि लाग्न चाहनुहुन्छ. भनेर अस्वीकार र उहाँलाई पछ्याउन र येशूले हामीलाई भनिएको छ.
मसीहीहरूले पट्टाइ लागि व्यापार छैन मजा, वा दुःख लागि आनन्द. तिनीहरूले अस्थायी सुख व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ, अनन्त सुख लागि. तिनीहरूले घातक सुख व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ, जीवन दिने सुख लागि. तिनीहरू क्षणिक व्यापार गर्दै हुनुहुन्छ, fickle सुख, स्थिर लागि, ठोस सुख रक.
III. हामी कसरी सही कुराहरू आनन्द लिनुहोस् नगर्नुहोस्?
हामी हाम्रो सृष्टिकर्ता विश्वास द्वारा बाँच्न.
हामी सबै विश्वास गरेर बाँच्न
या नगर्ने हामी यो वा महसुस, हामी सबै विश्वास को मान्छे हो. हरेक मानव. मसीहीहरूले, मुस्लिम, हिन्दूहरू, Buddhists, Agnostics, Atheists-सबै विश्वास द्वारा प्रत्यक्ष हामी, हामी कुनै पनि क्षण विश्वास के हामी प्रकाश बस्ने. खेलाडीहरूलाई छन् जसले तपाईंलाई ती साँच्चै कडा अभ्यास. किन? तपाईं यसलाई तपाईं आफ्नो खेल मा राम्रो हुनेछ भन्ने विश्वास किनभने. वा कसरी यो? तपाईं केही स्थानहरू प्राप्त गर्न Google नक्सामा ठेगाना राखे. किन? किनभने तपाईं विश्वास आफ्नो फोन तपाईं सही निर्देशन दिन भनेर. तपाईं विश्वास भने आफ्नो फोन धोखा हुनेछ, जो मलाई लाग्छ मेरो कहिलेकाहीं गर्छ, तपाईं यसलाई प्रयोग थियो. म मा र जान सक्छ. तर हामी सबै विश्वास द्वारा बाँच्न.
म असल जीवन राम्रो परमेश्वरको विश्वास द्वारा जीवित छ लाग्छ. उहाँले कसरी सही उहाँको सृष्टि आनंद बताउँछ. उहाँले आनन्द हामीलाई जान्छ.
हामी नै अन्त परमेश्वरको भन्दा अन्य केहि व्यवहार कुनै पनि समय हामी यसलाई सही आनंद गरिरहनु भएको छैन.
मजा गरेको पर्याप्त
तर शायद तपाईंलाई लाग्छ, म चाहन्न. म रमाइलो गर्न चाहनुहुन्छ. amused भइरहेको, आफैलाई आनंद सबै जीवनको बारेमा छ. यो छ यदि तपाईंलाई लाग्छ कि, तपाईं डरलाग्दो कुरा हुनुहुन्छ. तिमी मजा जग मा आफ्नो जीवन निर्माण भने, यो जीवन कठिन छ जब तल टम्बलिङ आउन छौँ. मजा, amused भइरहेको, अहिले आफैलाई रमाइलो लिन पर्याप्त छैन. किन अनन्त आनन्द पछि जाने?
र यो पछि सम्म पर्खन पर्याप्त छ. किन जीवित गर्न कुर्न? यो नक्कली कुरा chasing रोक्न र वास्तविक कुरा chasing सुरु.
यो एनबीए बेवास्ता जस्तै छ, किनभने तपाईं बरु एनबीए 2K प्ले थियो प्लेस्टेशन मा. यो नक्कली कुरा chasing रोक्न, र उपलब्ध भन्ने वास्तविक कुरा अँगालेको. C.S. लुईस उहाँले यो भन्नुभयो यस्तै विचार व्यक्त:
“असीमित आनन्द हामीलाई प्रस्ताव गर्दा हामी पेय र सेक्स र अभिलाषा साथ बारेमा fooling आधा hearted जीव हो, उहाँले के समुद्र मा एक छुट्टी को प्रस्ताव द्वारा चाहनुभएको छ कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ किनभने एक फोहर वस्ती मा माटोको Pies बनाउन मा जान चाहने एक नजान्ने बच्चा जस्तै. हामी टाढा पनि सजिलै खुसी छन्” - C.S. लुईस, महिमा को वजन
मलाई लाग्छ जीवन यी सबै क्षणिक सुख थियो प्रयोग. त्यसपछि म ख्रीष्टियान बने. म असल जीवन मेरो पुरानो तस्वीर विनाश कि मसीहीको रूपमा प्रारम्भिक पढ्न कुराहरू थिए. यहाँ एउटा उदाहरण छ.
छ लाभ मर्न
हामी सबै मान्छे समय समयमा मृत्युको बारेमा कुरा सुनेको छु. हामी मान्छे भन्न सुनेको छु, "जीवनमा केही पनि छैन पक्का छ तर मृत्यु र कर."एक लोकप्रिय Rapper भने, "म मृत्यु धोखा गर्न सक्नुहुन्छ कारण छैन जीवन पिट्न प्रयास छु।" मान्छे मृत्यु बचा सकिँदैन भनेर बुझ्न. तर एक जवान मसीही रूपमा, म कहिल्यै अघि सुनेका केही जस्तै थियो कि बाइबल मा मृत्युको बारेमा एक पद पढ्न. प्रेरित पावलले अनौठो तरिका मा मृत्यु बताउनुभयो. पावलले केवल मृत्यु निश्चित थियो भन्न भएन, उहाँले यो एक कदम अगाडी लिए. उसले भन्यो, "छ मर्न लाभ." के!?
मृत्यु हुँदा आफ्नो दिमाग छ, तिम्रो मुटु, र आफ्नो फोक्सोमा आफ्नो काम गरिरहेको रोक्न. मृत्यु परिवारका सदस्यहरूबाट जीवन र अलग को निष्कर्षमा अर्थ. मृत्यु आफ्नो जीवन काम भन्दा छ मतलब. हाम्रो अन्य परीक्षा विपरीत, मृत्यु छ, व्यक्ति लागि जो मर्छ, शाब्दिक "को दुनिया को अन्त"– जे भए पनि यो एक को अन्त. त्यसैले कसरी मृत्यु संभवतः लाभ हुन सक्छ? जब म मर्न म पैसा बनाउन सक्दैन? जब म मर्न म मेरो स्थिति वृद्धि गर्न सक्दैन. यो केवल असल जीवनको मेरो पुरानो दृश्य संग फिट भएन.
खैर मलाई पावलले-शब्दहरू मर्न यी चार द्वारा भनाइको तात्पर्य बुझ्न लागि क्रममा लाभ-म छ तिनीहरूलाई दाँया अघि आएको चार बुझ्न थियो. फिलिप्पी मा 1 उहाँले त जीवित रहन वा आफ्नो खेदो हातबाट मरिरहेका संग ठीक जस्तो देखिन्छ किन पावल भन्छन्. उहाँले पद लेख्छन् 21, "बाँच्नु छ ख्रीष्टको। "यी शब्दहरू संग, प्रेरित मलाई भन्नुभयो सबै बारे साँच्चै के जीवन- छैन पैसा, मेरो काम, छैन पनि परिवार- तर येशूले. कसरी मेरो आत्म-केन्द्रित सक्छ, स्थिति-आसक्त worldview कि सत्य अर्को बाँच्न?
जीवन ख्रीष्ट अलग्गै कुनै अर्थ छ, किनभने ख्रीष्टको यो सबै के छ छ. कुरा ठीकै आनंद त्यसैले, हामी सत्य पुष्टि गर्छ तरिकामा तिनीहरूलाई आनंद छ.
मजा आयो जब सबै राम्रो छ सन्दर्भ मा हुन चाहनुभएको थियो. हामी अन्त नै जस्तै केहि व्यवहार गर्दा यो गलत. हामी परमेश्वरको महिमा को अन्त गर्न एक साधन तिनीहरूलाई गर्नुपर्छ.
हामीले सकेसम्म धेरै महिला संग सेक्स हुनुपर्छ? वा अझै पनि तपाईं संग घनिष्ठ सम्बन्ध हुनुहुन्छ जसले? सेक्स भन्दा राम्रो विवाह करार मा उठाइरहेका छन्. दुई मान्छे आफ्नो जीवन को बाँकी एक अर्को प्रतिबद्ध, कहीं जाँदै छैन. त्यहाँ असुरक्षा लागि कुनै आवश्यकता छ, कुनै लाज. मित्रता सर्वश्रेष्ठ यस सन्दर्भमा उठाइरहेका छन्. त्यहाँ नम्रता छ, क्षमा, अनुग्रह, प्रेम.
यो पूजा गर्नुपर्छ जब पैसा भन्दा राम्रो उठाइरहेका छन्. यो पूजा गर्नुपर्छ जब पावर सर्वश्रेष्ठ उठाइरहेका छन्. यसलाई दूर गएपछि के हुन्छ? ठिक्क रक्सी मतवालापन भन्दा राम्रो छ. र च मार्ग तपाईं संगीत र चलचित्र आनन्द उठाउन सक्छौं. तर तिनीहरू सबै जीवन को अर्थ सम्बन्धित कसरी सोच्न: ख्रीष्टको. यो ख्रीष्टको पेश गर्नुपर्छ जब सबै भन्दा राम्रो उठाइरहेका छन्.
हामी भङ्ग गर्दै, र ख्रीष्टको सँगै हामीलाई फिर्ता राख्न आए. जब हामी पैसा उपासना, वा मित्रता, वा सेक्स, यो परमेश्वरको एक ठेस छ. अनि हामी ती अपराध लागि न्याय गर्न योग्य. तर परमेश्वरले ख्रीष्ट पठाइएको. येशूले गलत कुराहरू आनंद संग एक समस्या छैन, वा पापी तरिकामा राम्रो कुराहरू आनंद. यद्यपि येशू क्रूसमा हाम्रो अपराध लागि दण्ड लिनुभयो. उहाँले चिहानबाट उठेर हामीलाई अनन्त जीवन प्रदान गर्दछ.
हामी ख्रीष्टको पछि हाम्रो पुरानो तरिका छोडेर अपनाउँछन् छौँ भने हामी क्षमा गर्न सकिन्छ, र हामी हाम्रो मास्टर को आनन्द मा प्रविष्ट गर्न सक्नुहुन्छ. हामी हाम्रो सबै भन्दा राम्रो जीवन अहिले बस्नेछन्. तर उहाँले forevermore आनन्द र खुशी हामीलाई दिनेछौँ.
विजेता • अक्टोबर 24, 2013 मा 2:17 बजे • जवाफ
Triggz • अक्टोबर 24, 2013 मा 4:36 बजे • जवाफ
वाह!तपाईं साँच्चै परमेश्वरको brah एक पोत हो,र तपाईं साँच्चै एक विशाल तरिकामा मलाई परिवर्तन God.these पोस्ट मा आफ्नो भरोसा र विश्वास धेरै प्रेरित र म तपाईंलाई all.One दिन म चाहन्छु बस तपाईं जस्तै हुन हामीलाई खातिर हामीलाई लेखेर राख्न आशा भरोसा मलाई,(मलाई थाहा म 6year पुरानो जस्तै आवाज)म पहिले नै मसीही कारण मेरो र्याप र कविता सरेका छौँ कारण छ कि म अब जीवित छु के,हेर जस्तै ट्रयाक धन्यवाद आत्मा र हिप HOP.stay धन्य
Dawg र विश्वास राख्नुहोस् 116!
परमेश्वरको आशिष् दिनुहुन्छ.
Deondre • अक्टोबर 24, 2013 मा 4:41 बजे • जवाफ
म एक टिप्पणी ब्रो छोड्न आवश्यक dont म विश्वास तपाईं listener.May परमेश्वरको स्पष्ट समझ ल्याए येशूले नाम मा आफ्नो जीवन को हरेक क्षेत्र मा तपाईं आशीर्वाद जारी…
मौरिस • अक्टोबर 24, 2013 मा 4:51 बजे • जवाफ
एक वास्तविक मन ओपनर छ. म साझा गर्नुभएको शब्द को लागि परमेश्वरलाई धन्यवाद.
Geordan • अक्टोबर 24, 2013 मा 5:09 बजे • जवाफ
उहाँले बारेमा कुरा गर्दा “Cheesey मसीही संगीत” म माथि टूट, lol. धन्यवाद , यात्रा.
cole मसीही • अक्टोबर 24, 2013 मा 5:11 बजे • जवाफ
यो यस्तो भयानक पोस्ट छ! शब्दहरू र प्रेरणा को लागि धन्यवाद, यात्रा! तिनीहरूले नसुनिएका जाने छैन.
Jessie • अक्टोबर 24, 2013 मा 5:17 बजे • जवाफ
धेरै राम्रो यसो. धन्यवाद, Ruach HaKodesh, कि सत्य बोल्ने यो इच्छुक पोत मार्फत लागि. गजव।.
BrookeMeghan • अक्टोबर 24, 2013 मा 5:24 बजे • जवाफ
आमिन! साझेदारीको लागि र प्रोत्साहन लागि धन्यवाद.
“बाँच्न ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, र मर्न लाभ छ।” फिलिप्पी 1:21 – प्रभु, हामी साँच्चै यो हाम्रो जीवनमा बाहिर बाँच्न सक्छ! हामी तपाईं छन् स्वतन्त्रताको लागि धन्यवाद.
यर्मिया • अक्टोबर 24, 2013 मा 5:25 बजे • जवाफ
यो पढेर म सुनेपछि थियो बस जस्तै थियो
को प्रवचन , यसको ठूलो ,, महिमा !!!!!
कालेबले • अक्टोबर 24, 2013 मा 5:49 बजे • जवाफ
राम्रो सामान श्री. ली.
सामेल एक • अक्टोबर 24, 2013 मा 7:04 बजे • जवाफ
हाम्रो जीवनमा आनन्द को उद्देश्य र खुशी मा Enlightening persepective. साँच्चै तपाईं कसरी C.S देखि कि उद्धरण शामिल आनन्द. लुईस बच्चा बताइरहेका mudpies संग खेल्दै. हामी ख्रीष्टियनहरू रूपमा fullest जीवन आनन्द उठाउन सक्छौं!
MasiyaChoice • अक्टोबर 24, 2013 मा 11:16 बजे • जवाफ
हो साँच्चै मर्न बढाउनका छ. ख्रीष्टको हामी बाँच्न सक्छ मृत्यु र हामी उहाँलाई लागि बाँच्न गर्नुपर्छ. रूपमा जवान मानिसहरूको सांसारिक सुख मर्न गरौं र स्वर्गीय सम्पत्तिहरू जीवित हुन.
Steph • अक्टोबर 25, 2013 मा 12:38 छु • जवाफ
म ब्लग यात्रा ली कदर. म उच्च विद्यालय हुँदा यो धेरै संग म संघर्ष, पनि पटक अब गर्दा कलेज मा मा…बस कसरी येशूले सबै छ कि पुष्टि गर्छ कि बाटो मा कुराहरू रमाइलो गर्न र बाहिर बस्ने जस्तै कि देखिन्छ कुरा बुझ्न प्रयास. पुनः धन्यवाद.
MotsiriLebea • अक्टोबर 25, 2013 मा 5:34 छु • जवाफ
वाह. म बोल्न नसक्ने हुँ. जस्तै साँच्चै ? म मतलब म म ख्रीष्टको आउन अघि myslef परिवर्तन गर्न पायो लाग्यो तर गलत थियो.
यूरी • अक्टोबर 25, 2013 मा 9:19 बजे • जवाफ
तेजस्वी! म teenaged केटाहरू एक मण्डप सन्देश यो परमेश्वरको कारीगरी को हुन अर्थ के यस सप्ताह दिने छु. यी उत्कृष्ट अंक छ कि म हुनेछ पनि तिनीहरूलाई सम्भवत आवरण.
Kiara • अक्टोबर 26, 2013 मा 7:04 बजे • जवाफ
यो पोस्ट साँचो आशिष् हो.
पीछा • अक्टोबर 28, 2013 मा 3:52 बजे • जवाफ
ठूलो सन्देश, यात्रा. यो गाढा संसारमा ज्योति भएर गर जहाँ अभिनेता को बहुमत & मिडिया सम्भव सबै बाहिर ख्रीष्टको राख्न प्रयास. राम्रो मान्छे, उहाँको रगत द्वारा सुरक्षित, सधैं अन्त मा जीत हुनेछ!
-परमेश्वरको आशिष् दिनुहुन्छ
Shauneil • अक्टोबर 28, 2013 मा 5:16 बजे • जवाफ
harbeegail • अक्टोबर 28, 2013 मा 5:19 बजे • जवाफ
म भन्न पर्छ… यो परमेश्वरको एउटा सन्देश छ. म amidst मेरो सँगी युवा यो हिजो बारेमा talkd र तिनीहरूले मलाई एक outcast जस्तै देखे. म ढुक्कको महसुस र अहिले यो संग strenghtened. कुनै फिर्ता जा… येशूले कहिल्यै. परमेश्वरको अनुग्रह ब्रो बढी.
रिकी जोर्डन • अक्टोबर 29, 2013 मा 2:26 छु • जवाफ
यो एउटा वास्तविक आशिष् यात्रा हो. राज्यको लागि कार्य जारी राख्न.
uche • अक्टोबर 29, 2013 मा 3:16 छु • जवाफ
Enan • अक्टोबर 29, 2013 मा 8:43 बजे • जवाफ
तपाईं bro धन्यवाद. म साँच्चै यो आवश्यक. एक जवान मसीही किशोर रूपमा, म अक्सर खुशी र आनन्द छ के को गलत व्याख्या मिल्यो गर्नुभएको. तर पछि यो पढेर, म एक सानो राम्रो बुझ्न जस्तै म महसुस. म साँच्चै यो कदर. फेरि पनि धन्यबाद, भगवान तिमी र परिवार आशीर्वाद. येशूले तपाईं प्रेम…
elvis • अक्टोबर 29, 2013 मा 11:16 बजे • जवाफ
तपाईं यो वेबसाइट र आफ्नो स्थानीय चर्च संग गर्दै गरिएको छ के को लागि उत्साहित…म स्टूडियो मा यू देखेर फिर्ता लागि ज्यादातर उत्साहित छु…यू आउँदै के म juiced छु
लुईस unelle हुनेछ • अक्टोबर 30, 2013 मा 8:11 छु • जवाफ
यो एक राम्रो सन्देश थियो, यो मलाई ministered र पद Phillipians धर्मशास्त्रमा लेखिएको बारेमा बोल्ने लागि धेरै धन्यवाद 1:21. म प्रवचन सुनेर यसलाई बुझ्न धेरै पटक प्रयास गरिएको छ. म परमेश्वरको बृद्धि र निर्माण-मा राज्य गर्न तपाईंले प्रयोग गर्न जारी कि प्रार्थना. परमेश्वरले तपाईंलाई bro आशीर्वाद।. शान्ति & प्रेम ♡
DavidMoyo • नोभेम्बर 1, 2013 मा 8:01 छु • जवाफ
यो भयानक विलियम छ, साँच्चै प्रभुको प्रयोग गर्न आफ्नो transperancy र आफैलाई अनुमति दिन तपाईँको humily कदर. परमेश्वरले तपाईंलाई आशिष
Marjorie • नोभेम्बर 1, 2013 मा 7:22 बजे • जवाफ
यो ब्लग मा यो र अन्य धेरै सन्देशहरू समयमा सही & विन्दुमा! प्रभु प्रशंसा! यो ब्लग बनाउन को लागि धन्यवाद, म सधैं त तपाईंको पोष्ट द्वारा प्रभुमा प्रोत्साहन छु. कृपया बोल्ने र लेख्ने मा राख्न! परमेश्वरको तपाईं र तपाईंको परिवारलाई आशीर्वाद सक्छ!
जेनिफर • नोभेम्बर 15, 2013 मा 7:29 बजे • जवाफ
वाह! यो सन्देश वास्तवमा मलाई कुरा! तपाईं परमेश्वरको लागि के को लागि र सुसमाचारको को unashamed हुँदा लागि धेरै धन्यवाद. साथै, दिँदै लागि परमेश्वरले आफ्नो जीवन नियन्त्रण. परमेश्वरको तपाईं र तपाईंको अचम्मको परिवार आशिष् मा राख्न सक्छ!
तपाईं मेरो जीवनमा यस्तो ठूलो आशिष् हो!
Endy • जनवरी 19, 2014 मा 5:27 बजे • जवाफ
वाह!! यो क्षण सम्म अप, म यो थोडे खुला tho't,interestin,जस्तै म #Francinerivers पुस्तकहरू पढ्न व्यावहारिक ख्रीष्टियन कल्पना JST थियो. म केहि भन्न शब्दहरू कमी. यो टुक्रा साँच्चै मलाई केही छोयो र अब छ तयार छु 100% God..thanks TL..God लागि बाँच्न तपाईं आशिष् हुनुको राख्न मद्दत. #आमिन!
माइकल • जनवरी 29, 2014 मा 1:35 बजे • जवाफ
ठूलो पोस्ट, म दृष्टान्तहरू साँच्चै मनपराएका.
हामी साँच्चै सुरक्षित छन् भने, र परमेश्वरले हामीलाई नयाँ सफा हृदय सिर्जना, उहाँको आज्ञा greivous छैन. (1जन)
मलाई गलत प्राप्त छैन, हामी अझै पनि शिक्षा आवश्यक, तर हामी सुरक्षित छन् भने कुरा हामी गर्न चाहनुहुन्छ छैन हो. प्रलोभनको अझै पनि पक्कै आउनेछ, तर परमेश्वरले हामीलाई हामी सहन सक्छ के माथि प्रयास गर्न अनुमति छैन. उहाँले एक भाग्ने सिर्जना गर्नेछ.
जोश • फेब्रुअरी 17, 2014 मा 2:48 बजे • जवाफ
यात्रा यो अचम्मको छ! तिमीलाई धेरै धन्यवाद! म आफ्नो प्रवचन प्रेम, तिनीहरूले मलाई बुझे हामी साँच्चै राम्रो परमेश्वरको छैनन् बनाउन. तपाईं bro धन्यवाद! राम्रो काम राख्न.
म छु 17 वर्ष पूरानो, र म सिर्फ थाहा परमेश्वरको अचम्मको भविष्यमा मेरो लागि तल राखे छ.
म पनि आफ्नो प्रवचन मा दर्शाउन लेखिएको छ कि चाहनुहुन्छ. तपाईं एक पत्र भूल lol “को” तपाईं यस्तो लेखे “च” lol केवल सबै भन्ने मेरो आँखा समातिए. यो कहाँ छ
“… र च मार्ग तपाईं संगीत र चलचित्र आनन्द उठाउन सक्छौं. तर तिनीहरू सबै जीवन को अर्थ सम्बन्धित कसरी सोच्न: ख्रीष्टको. यो ख्रीष्टको पेश गर्नुपर्छ जब सबै भन्दा राम्रो उठाइरहेका छन्।”
म थप सुन्न हुनेछ! तपाईं bro धन्यवाद!
ग्याल्याक्टिक • अक्टोबर 19, 2014 मा 12:13 छु • जवाफ
नमस्ते, सबै तरिकाले यहाँ रहेको छ र बिल्कुल हरेक एक जानकारी साझेदारी छ, कि साँच्चै राम्रो छ, माथि लेखन राख्न.
जस्टिन • अक्टोबर 29, 2014 मा 9:57 बजे • जवाफ
वाह तपाईं एउटा अचम्मको लेखक र शिक्षक छन्! जसमा तपाईं सुसमाचारको प्रचार गर्ने तरिका त enlightening छ. म सुन्न र सबै दिन आफ्नो प्रवचन पढ्न सकिएन! तिनीहरूले प्राण लागि साँचो खाना हो. भगवान तपाईं र तपाईंको परिवारलाई आशीर्वाद!
Olobz • डिसेम्बर 1, 2014 मा 5:56 बजे • जवाफ
राम्रो राम्रो राम्रो मानिस.
आफ्नो राम्रो मोडेल र प्रेरणा. म हामी सबै स्वर्ग देख्न आशा, त्यसपछि मात्र त हामी मीठा विजय गाउन 'गर्न सक्नुहुन्छ’ यसलाई गरेको पूर्णतामा मा. अब परमेश्वरको आशीर्वाद
Keaton • फेब्रुअरी 22, 2015 मा 12:28 छु • जवाफ
bro, म एक संगीतकार भन्दा प्रचारक बढी मन पराउँछु र मेरो मनपर्ने Rapper छन्. म साँच्चै मन्त्री आधार गर्न सेवकको मा कुरा गर्न मौका प्रेम थियो. म साँच्चै उहाँलाई लागि आफ्नो हृदय प्रेम. यदि म मई, म संगीत परित्याग गर्नुपर्छ लाग्छ छैन 100%. म यसको एक मंच परमेश्वरले सन्तहरू edify र पापी evangelize गर्न दिएको छ विश्वास. म तपाईंलाई परमेश्वरको मानिसहरू र आफ्नो अद्भुत सांगीतिक उपहार गोठालोले झैं हेरविचार गर्न पनि राम्रो म चिन्ने आवेग मिलाप गर्न सक्षम हुनुहुन्छ प्रार्थना. परमेश्वरले तपाईंलाई आशिष प्रिय भाइ!
tamsyn • डिसेम्बर 28, 2015 मा 2:45 बजे • जवाफ
प्राण परमेश्वरको यति महत्त्वपूर्ण छन्! र वाह जब म काम परमेश्वरले तपाईंलाई मार्फत गरिरहेको छ श्रद्धा छु धेरै पोस्ट हेर्न. याे अास्चर्यजनक छ. मा राखन मा राख्न. हरेक बीउ र पानी देवता उहाँको सुन्दर धरती मा फैलाने तपाईंले प्रयोग आशीर्वाद. उहाँले बढ्न र सबै बीउ निविदा सक्छ.